Guddiga Hawlaha Dadweynaha wuxuu hadda aqbalayaa codsiyada amaahda - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Hawlaha Dadweynaha ayaa hadda aqbalaya codsiyada amaahda
Guddiga Hawlaha Dadweynaha ayaa hadda aqbalaya codsiyada amaahda
Maaliyad cusub oo diyaar u ah dhismaha, dhismaha ka hor iyo amaahda degdegga ah ee mashaariicda kaabayaasha bulshada
OLYMPIA, Dhaq. –Waxay Guddiga Howlaha Guud ee Gobolka Washington waxay aqbashaa codsiyada dhismaha kaabayaasha iyo amaahda dhismaha ka hor, hadda ilaa saqda dhexe, Luulyo 12, Magaalooyinka, degmooyinka, ujeedooyinka gaarka ah ee degmooyinka iyo ururada dawladaha hoose ka kooban ayaa codsan kara. Nidaamyada kaabayaasha dhaqaalaha ee u qalma amaahda gobolka ee dulsaarku aadka u hooseeyo waxaa ka mid ah biyaha guryaha, bulaacada nadaafadda, qashinka adag iyo dib u warshadeynta, waddooyinka iyo jidadka, buundooyinka iyo biyaha duufaanka.
qiyaastii $ 68 million ayaa diyaar ah dhismaha amaahda, iyo $ 17 million waayo, dhismaha ka hor amaahda. Wareeg codsi cusub ayaa furmi doona lixdii biloodba mar deynta dhismaha iyo seddexdii biloodba mar deymaha dhismaha ka hor, illaa dhammaan lacagaha loo qoondeeyay ay ka dhammaadaan.
Tani waa wareegii ugu horreeyay ee dalab amaah ah ee miisaaniyadda cusub ee gobolka 2019-21. Lacagaha waxaa la siiyaa mashaariicda ka gudba marinka qiimeynta ee ku saleysan habka qiimeynta tartanka. Waxay kuxirantahay tirada iyo shahaadooyinka codsadayaasha, majiraan lacag damaanad qaad ah oo loo heli doono wareegyada amaahda mustaqbalka.
Qiimeynta iyo darajaynta codsiyada dhismaha iyo dhismaha kahor waxay bilaaban doonaan July 15 waxaana abaalmarin la filayaa bisha Ogosto.
Dhismaha Gurmadka dalabyada amaahdu way furan yihiin marka horeba, marka horeba loo adeego, illaa dhammaantood $ 4.7 million barnaamijkan loo qoondeeyay wuu daalay.
Booqo Maalgelinta Guddiga Howlaha Guud bogga wixii macluumaad dheeraad ah, iyo inaad ku buuxiso arjiga khadka tooska ah.
← Ganacsiga ayaa abaalmarin ka badan $ 8.7 milyan si kor loogu qaado waxtarka tamarta iyo qorraxda ee dhismayaasha dadweynaha Cinwaanka "Gobolka Aerospace ee Mareykanka" cinwaannada cinwaannada gobolka Washington ee Paris Air Show →